Esteban González Pons, onye edemede nke Ellas. Ajụjụ ọnụ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: Esteban González Pons. Nkọwa Twitter.
Ee Esteban Gonzalez Pons A maara ya karịa ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, mana ọ bụ n'akụkụ akụkụ ya ebe ọ na-ekwu na ọ kachasị nwee ahụ iru ala. Akwụkwọ mbụ ya bụ Ha, ebe ọ na-apụ nko ahụ na a akụkọ ịhụnanya. Chọrọ daalụ nke ukwuu oge Gị na obi ọma Gị dị ukwuu n'inye m ajụjụ ọnụ a ebe ọ na-agwa anyị ihe banyere akụkụ ahụ nke egwu na mmekọrịta chiri anya.
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS - AJ INJ.
AKW LKWỌ AKWITKWỌ: Gịnị ka akwụkwọ akụkọ gị na-agwa anyị, Ha, na gịnị kpatara akụkọ ịhụnanya?
ESTEBAN GONZALEZ PONS: Ha gụọ otu akụkọ ịhụnanya n'agbata nwa agbọghọ na nwa nwoke a mụrụ na afọ 60. Ọ bụ a akwụkwọ akụkọ, banyere anyị bụ ndị a mụrụ mgbe Franco ka dị ndụ ma ọ bụ ka nwụrụ anwụ, Ensmụaka nke mgbanwe. E debere akụkọ ahụ, n’akụkụ ya, na Valencia nke Copa América, obodo ahụ na-enwu ma na-achị ọchị, na Valencia mgbe nsogbu brik, n'akụkụ ụfọdụ. Obodo abụọ na-emegiderịta onwe ha dị n'otu ebe na eserese.
EGP: Akwụkwọ m bụ Ahụhụ Ahụhụ site Poe, na mbipụta ndị ntorobịa. Agbanyeghi na aghaghi m ekwuputa akwukwo akwukwo ndi edere na comic, nke ana akpo Ihe omuma ndi umuaka, nke ejiri otutu akwukwo ihe omimi nke XNUMXth XNUMXth mee ka m di elu dika onye na-eto eto, site na Ivanhoe elu Michael Strogoff o sandokan, ọmụmaatụ. Obi na-atọ m ụtọ ma m cheta ha.
Tupu nke ahụ, akwụkwọ izizi mbụ m gụrụ, abụghị nke m, kama na mbinye aka n'aka nwanne nna m nwoke Guillermo, ha bụ albums Mortadelo na Filemon. N'ihi na Ana m agbachitere na ha nyere Princess nke Asturias nke Arts na F. Ibañez, n'ihi na ejiri m n'aka na Nrite Nobel na-esote n'asụsụ Spanish ga-agụ akwụkwọ nwata ya na Mortadelo na Filemón.
M dee ebe m nwere ike icheta. Na mbụ, Akụkọ ụjọ enwe mmetụta Poe na akụkọ banyere Agha nke Nnwere Onwe na-eitatingomi usoro mbụ nke Mba ngosipụta na biography nke Napoleón nke Emil Ludwig dere. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ahụ ghọrọ naanị m isiokwu m bidoro na-ede ederede uri ọjọọ.
EGP: Mgbe ịmalitere ịgụ akwụkwọ niile ha kụrụ gị. Nke nwedịrị ihe kacha mee m obi ụtọ mgbe m bụ nwa okorobịa Onyenwe nke yiri mgbaaka, ọtụtụ afọ tupu fim emee ka ọ bụrụ onye a ma ama. Ọ na-ewute m mgbe sinima na-etinye akwụkwọ na-amasị m ma na-ekwupụta atụmatụ ya dị ka a ga-ekewapụ ya na akwụkwọ ya. Tolkien nwere m nke ukwuu nke na o dere poems na "elvish" maka ụmụ agbọghọ, na nke ọ bụla achọghị ịbụ enyi nwanyị m, n'ezie. Echere m na Tolkien mere m geek.
EGP: Mgbe ị hụrụ akwụkwọ n'anya, ọ bụ casi agaghị ekwe omume ikwu onye edemede kachasị amasị ya n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ihe masịrị gị. Aga m ekwu Na-emeri, onye nwere Akụkọ mgbe ochie, n'ihi na m na-agakwuru ya oge niile ime ka ihe rapara m n'ahụ. Ma n’ihi na m ga-achọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye, n’agbanyeghị na m ma na agaghị m emeli ya. Ọzọkwa ka Ndị ahịanwere ọ ugbua Reszọ, nke m gụrụ ma gụgharịa ịmụ asụsụ Spanish. Na Valle-Inclán, nke m nwere na nkwụsị m ugbu a.
N'etiti ndị na-ede uri, Luis Cernuda, Angel Gonzalez na Antonio Colinas, dị iche, so na ndị ọkacha mmasị m. Ka anyị tinye Joan Margarite na anyị nwụrụ. N’etiti ndị na-ebipụta akwụkwọ ugbu a, n’ebughi n’obi ịgwụcha agwụcha, agụrụ m ihe niile ha bipụtara Manuel Vilas, Victor nke Osisi, Lawrence Silva, Jose Zoilo ma ọ bụ Santiago Castellanos, dị ka ihe atụ.
EGP: Onye ara nzuzu Ihe omimi nke anwu anwu nke Eduardo Mendoza dere. O yiri ka ọ bụ ihe a na-apụghị imeri emeri na ọdịnala Spanish rogue. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi gị nzuzu, echere m na ihe na-abụghị picaresque abụghị akwụkwọ akụkọ Spanish.
EGP: Mgbe m bụ nwata m dere n'abalị, ugbu a n'ụtụtụ. Mbido m na-ebili n'echiche m. Na echiche kachasị mma na-abata n'uche na ịsa ahụ. Mgbe m si n‘ebe ịsa ahụ pụta, m na-echefu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha nile.
EGP: Amaja m gwa ya? Ọ na-amasị m ịde ihe ndina. Na-eteta na isii, dịka ọmụmaatụ, na-ewere kọfị na kọmputa na-ehi ụra ma ghara ịpụ ebe ahụ ruo mgbe m nwere ọ dịkarịa ala peeji abụọ edere. O di nwute na enwere m ike imeli na ngwụsị izu. Ha Edere m ya na ụgbọ elu na ụgbọ oloko na ime ụlọ echere. Gagharị maka ọrụ site na ebe a gaa ebe ọzọ.
EGP: Abụọ. Abụghị m uri, nna m na nwa m, abụ m onye na-agụ uri, a na-asọpụrụ m.
EGP: Emechara m Nwa nna site na Víctor del Arbol na m kwadoro ya. M na-amalite na Otu esi eme ihe ọ bụla nke Jenny Odell na 1794 si Natt och Dag, a ga m agwa gi otu. Na Ana m ede akwụkwọ m ọzọ, akụkọ na-atụ ụjọ nke m tụrụ anya inyefe onye nkwusa na Septemba.
AL: Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ ị nwere ike idobe ihe dị mma nke ga-enyere gị aka maka akụkọ akụkọ ọdịnihu?
EGP: Ekwenyesiri m ike na ihe otiti ahụ ga-abịara anyị niile ndị na-ede akụkọ anyị niile. Onye edemede bụ ihe dị ndụ, ọ bụghị ihe bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Esteban González Pons, onye edemede nke Ellas. Ajụjụ ọnụ